न्यायाधीश सिन्हाको प्रश्न– चुनावपछिको सरकारले फेरि विघटन गर्दियो भने ?
२०७७ माघ २९ बिहीबार १२:४१:००
न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले चुनाव भएपछि फेरि विघटन दोहोरिन सक्ने सम्भावना रहेको र त्यसो भएमा के हुने भनी प्रश्न गरेका छन् । संसद् पुनर्स्थापना हुनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटउपर बहस गर्ने क्रममा अधिवक्ता बाबुराम दाहाललाई उनले यस्तो प्रश्न गरेका हुन् ।
‘यदि चुनाव भयो, तर दुईतिहाइ मत प्राप्त भएन भने त्यो वेला विघटनको अधिकार हुन्छ कि हुँदैन ?’ उनले जिज्ञासा राखे । जवाफमा अधिवक्ता दाहालले विघटन भन्नेबित्तिकै डराउनुपर्ने अवस्था नरहेको बताए । उनले भने, ‘हाम्रो कल्चर कस्तो भयो भने आफैँ पदमा पुर्‍याउने, आफैँ खुट्टा तान्ने, ? तर, सिन्हाले उनलाई प्रश्नभित्र रहेर बहस गर्न आग्रह गरे ।
न्यायाधीश सिन्हाले थपे, ‘चुनाव भएको एक–दुई महिनामा फेरि विघटन गर्छ भने देश कतातिर जान्छ ? हाम्रो संविधानको निष्कर्ष यही हो ? अधिवक्ता दाहालले जवाफमा भने, ‘जनताले पाँच वर्षका लागि म्यान्डेट दिएको, काम गर्न दिनुपर्छ । पहिला नै खुट्टा तान्छन् भन्ने छैन । मान्छेले गर्ने कामै होइन त्यो । त्यो फेरि यो अवस्था हुन्छ भन्ने छैन नि !’
#न्यायाधीश # अनिल कुमार सिन्हा
सर्वाेच्चमा प्रस्तावित दुई न्यायाधीशविरुद्ध सात उजुरी
सर्वोच्चका प्रस्तावित न्यायाधीशबारे संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले उजुरी आह्वान गर्ने